FAQs - JIANGSU IMI ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY CO., LTD
F: Aiza ny orinasa misy anao? Ahoana no fomba hitsidihako azy?
A: Ny orinasa misy anay dia miorina ao amin'ny tanànan'i WUXI, Sina.
A: Matetika izahay dia mangataka 30% amin'ny T / T mialoha, mandanjalanja alohan'ny fandefasana, na 100% amin'ny alàlan'ny L / C voamarina tsy azo ivalozana eo imasony. Manaiky ihany koa izahay fa hafindra amin'ny SINOSURE
F: Azoko atao ve ny manana ny vokatra namboarina manokana?
A: Eny, tongasoa anao manokana ny takiana aminao momba ny loko, ny logo, ny endrika, ny fonosana, ny baoritra, ny boky amin'ny fiteny sns.
F: Inona ny ora fanaterana?
A: maharitra 45 andro vao vita ny baiko. Fa ny tena ora dia mifanaraka amin'ny tena zava-misy.
F: Azoko atao ve ny mampifangaro modely isan-karazany amin'ny fitoeran-javatra iray?
A: Eny. Ny maodely samihafa dia azo afangaro ao anaty fitoerany iray.
A: Voninahitra ho anay ny manolotra anao santionany amin'ny fizahana kalitao. Ny santionany amin'ny maodely tsirairay dia tokony ho singa iray.
Q. Inona ny teny fonosanao?
A: Amin'ny ankapobeny, atosinay anaty boaty fotsy tsy miandany sy baoritra volontany ny entanay. Raha manana patanty voasoratra ara-dalàna ianao dia afaka manangona entana ao anaty boaty misy marika izahay aorian'ny nahazoana ny taratasy fanomezandàlana anao.
Q. Manana stock e-bisikileta ve ianao?
A: Tsia, mba hitazomana ny kalitao, ny bisikileta e-bisikileta rehetra dia hovokarina miaraka aminao, anisan'izany ireo santionany.
Q. Azonao atao ve ny mamokatra mifanaraka amin'ny santionany?
Q. Inona ny politikanao santionany?
Q. Mizaha toetra ny entanao rehetra alohan'ny fanaterana ve ianao?
F: Ahoana no anaovanao ny orinasanay maharitra sy fifandraisana tsara?
A: 1. Mitandrina ny kalitao sy ny vidin'ny fifaninanana izahay mba hahazoana antoka fa ahazoan'ny mpanjifanay tombony;
2. Manaja ny mpanjifa rehetra amin'ny maha sakaizanay izahay ary manao raharaham-barotra amin-kitsim-po sy manao sakaiza amin'izy ireo, na avy aiza na avy aiza na avy aiza ary ohatrinona no vola naloa azon'izy ireo tamin'io asa io.
F: Hafiriana ny fe-potoana fiantohana anao?
A: Fiantohana voafetra roa taona. Raha ny olanay dia hanome solon'anarana vaovao izahay ary hitarika anao hanamboatra amin'ny horonan-tsary.
F: Ahoana ny fahaizanao R&D sy ny refin'ny ozinina?
A: Manana ekipa R&D injeniera 10 mahery izahay ary mandefa modely vaovao 4 isaky ny 6 volana.